स्थानीय तहलाई बजेट दिनुअघि अधिकार र कर्तव्य बुझाउनुपर्छ - Karobar National Economic Daily
स्थानीय तहलाई बजेट दिनुअघि अधिकार र कर्तव्य बुझाउनुपर्छ
query_builderMay 25, 2017 12:04 PM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility608
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को वार्षिक बजेट संघीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी ल्याइँदैछ । सरकारले यही जेठ १५ गते नवगठित स्थानीय तहमा बजेट पठाउने तयारी गरिरहेको छ । यद्यपि, स्थानीय तहलाई सीधै बजेट पठाउने कि आवश्यक सूत्र बनाएर विनियोजन गर्ने भन्नेबारे सरकारले आधिकारिक निर्णय दिइसकेको छैन ।
आउँदो बजेट कार्यान्वयन मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र विकास प्रभावकारिताका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासको ढोका खोल्न, दैनिक प्रशासनिक सेवाप्रवाह सहज बनाउन र निक्षेपित अधिकारको उपयोग गर्ने मार्गप्रशस्त पनि नयाँ बजेटले नै गर्नेछ । तर, बजेट कार्यान्वयनको अधिकार दिनुअघि स्थानीय तहलाई संविधानमा उल्लिखित अधिकार र कर्तव्यबारे बोध गराउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
अधिकार र कर्तव्यबारे स्थानीय सरकार सचेत नभए स्वेच्छाचारिता हाबी हुने र त्यसले अन्ततः संघीय व्यवस्थाकै भविष्य संकटमा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । संघीय बजेट, स्थानीय तहमा विकास प्रभावकारिता र बजेट सदुपयोगका विषयमा कारोबारकर्मी विजय देवकोटाले विज्ञहरूसँग गरेको कुराकानी ः
अधिकार प्रयोग गर्नुअघि स्थानीय सरकारलाई दक्ष बनाउनुपर्छ
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा नेपालमा प्रक्रियागतभन्दा अनुकूलतामा काम भइरहेको देखिन्छ । जस्तो कि, स्थानीय तहका लागि कतिपय कानुन प्रदेशले बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रदेशको निर्वाचन नहुँदै स्थानीय सरकार गठन भइसक्यो, यसले प्रक्रियागत रूपमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न समस्या पर्न सक्छ, तैपनि स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि चयन हुँदै गरेको अवस्थामा आउँदो बजेटले ठूलो अर्थ राख्दै छ ।
यस्तो अर्थपूर्ण बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बस्ने कार्यालयसमेत छैन, स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्ने संरचना छैन । कम्तीमा बजेट कार्यान्वयन हुने दिन अर्थात् साउन १ गतेअघि नै सकेसम्म यी संरचना उपलब्ध गराउनैपर्छ । नत्र, नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा संरचना अभाव नै मुख्य समस्या बन्न सक्छ ।
नयाँ बजेटसम्बन्धमा खासै पूर्वतयारी गरेको देखिन्न । परिस्थिति नै त्यस्तै परेकाले पनि तयारी नभएको हुन सक्छ । तर, संघीय बजेट कार्यान्वयन तयारीमा सरकारले जुन हेलचेक्र्याइँ ग¥यो, विनियोजन प्रक्रियामा यो समस्या दोहो¥याउनु हुँदैन । स्थानीय तहले बजेट खर्चने आवश्यक विधि बनाएर मात्रै विनियोजन गर्ने अडान राख्नु हुँदैन, किनकि विधि पछि पनि बनाउन सकिन्छ ।
त्यसैले, आउँदो बजेट स्थानीय तहमै पुग्ने गरी सोझै विनियोजन गर्नुपर्छ । स्थानीय तह गठनसँगै विकासप्रति जनआकांक्षा ह्वात्तै चुलिएको छ । जनताको आकांक्षाअनुसार विकासका काम अघि बढाउन पनि तत्काल सोझै बजेट नपठाई हुँदैन । किनकि साउन १ गतेदेखि नै संघीयता महसुस हुने गरी स्थानीय तहमा विकासका काम अघि बढाउनुपर्छ । स्थानीय तहलाई बजेट पठाउँदा चालू र पुँजीगत खर्चको सीमा तोक्न सकिन्छ, तर पूरक बजेटका नाममा स्रोत नै रोक्नुचाहिँ हुँदैन ।
स्थानीय तहलाई अधिकार प्रयोग गर्न दिनुअघि तालिममार्फत सबल बनाउनुपर्छ । दैनिक सेवाप्रवाह, विकासका काम र प्रशासनिक गतिविधि सञ्चालन गर्नेबारे पूर्ण तयारीसाथ लाग्दा धेरै राम्रा काम हुन सक्छ । स्थानीय सरकारलाई आफ्ना अधिकार र कर्तव्यबारे सचेत गराउनैपर्छ । अधिकार त दिइएको छ, तर नतिजा खोजिन्छ । नतिजा नआए कारबाही पनि हुनसक्छ भन्ने बोध गराउनुपर्छ ।
अपेक्षा गरिएको विकास पहिलो वर्षमै सम्भव नभए पनि स्थानीय तहले दीर्घकालीन विकासको आधार पहिलो वर्षमा नै तयार गर्नुपर्छ । स्रोत र साधन आफैंले जुटाउने, सेवाप्रवाह र विकासका काम अघि बढाउने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । स्रोत जुटाउने नाममा नागरिकमाथि अन्याय हुने गरी कर लगाउने र दैनिक जीवनयापनमै अवरोध आउने गरी कुनै निर्णय गर्नु हुँदैन । गलत मनसायका साथ कुनै निकायले यस्तो काम गरे माथिल्लो तहले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकेपछि कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती खर्च पारदर्शिता नै हो । यसअघि सर्वदलीय संयन्त्रमा रही स्रोतसाधन दुरुपयोग गरेका अधिकांश राजनीतिक कार्यकर्ता नै स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिका रूपमा चुनिएका छन् । एउटै दलका कार्यकर्ताकै समूह चुनिएको स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको खतरा झन् बढी छ ।
सम्भावित भ्रष्टाचारको खेल रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक र सतर्कताजस्ता निकाय सक्रिय हुनुपर्छ, स्थानीय सरकारले गर्ने हरेक कामको निगरानी राख्नुपर्छ, तर भ्रष्टाचार पुष्टि नै नभई काममा हस्तक्षेपचाहिँ गर्नु हुँदैन, जो यसअघि भयो र दर्जनौं विकासका काम अवरुद्ध भए ।
बजेट सोझै पठाउनुपर्छ तर निगरानी गर्नुपर्छ
सभापति, विकास समिति
मुलुक संघीय संरचनामा गई स्थानीय सरकार गठन हुने क्रममा छ । यस्तो अवस्थामा बृहत् अध्ययन र अनुसन्धानमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्ने थियो । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन र सरकार परिवर्तनका कारण परिपक्व बजेट नआउने देखियो । १५ दिनअघि नै पूर्वबजेट छलफल हुनुपथ्र्यो, त्यो पनि हुन सकेन । किनकि कामचलाउ सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आइप-यो ।
यस्तो अवस्थामा आउने बजेटमा निश्चय नै नयाँ कार्यक्रम समावेश हुँदैनन्, तर यसअघिको बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने आधार बजेटमार्फत नै तयार गर्नुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने विषय निकै महŒवपूर्ण छ । आवश्यक सूत्र बनाएर स्थानीय तहलाई बजेट पठाउनुपर्छ ।
बजेट आउन केही दिनमात्र बाँकी रहेकाले अपेक्षा गरिएको सूत्र नै कायम गर्न नसके पनि कुनै ब्लकमा बजेट छुट्ट्याएर अर्थले सोझै स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साउन १ गतेदेखि हुने विकास–निर्माणका काम यही बजेटबाटै सुरु गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमै पूरै बजेट पठाउन नसके पनि निश्चित रकम स्थानीय तहमा जाने गरी नछुट्ट्याए विकासका काम प्रभावित हुन जान्छ ।
जेठ १५ मै बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयन साउन १ देखि हुने भएकाले बीचको डेढ महिनामा स्थानीय तहका लागि बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी आवश्यक फर्मुला बनाउन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि सोही फर्मुलाका आधारमा बजेट कार्यान्वयन गराउनतर्फ संघले तयारी थाल्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले पनि बजेटको पारदर्शी र प्रभावकारी परिचालनका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहमा पहिलो वर्ष जाने बजेटले निकै अर्थ राख्ने भएकाले आवश्यक लक्ष्य निर्धारण गर्ने र वैज्ञानिक आधारमा विकासका आयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ । बजेटको आकारसमेत ठूलो हुने हुनाले कार्यान्वयनमा नागरिक समन्वय अपरिहार्य देखिन्छ ।
स्थानीय तहले स्वायत्तताका नाममा बजेट दुरुपयोग गर्ने सम्भावना औंल्याइँदै छ । स्रोतको दुरुपयोग रोक्नैपर्छ, अन्यथा नयाँ प्रशासनिक संरचनामाथि नागरिकको विश्वासमा आँच आउन सक्छ । काममा पारदर्शिता कायम गर्ने काम जनप्रतिनिधिकै हो । यद्यपि निर्वाचित स्थानीय सरकार भएकाले पहिलेजस्तो अपारदर्शी काम हुने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ ।
अर्कातिर स्थानीय सरकारमा भिन्न राजनीतिक दर्शन बोकेका प्रतिनिधिहरूको सहभागिताले पारदर्शिता कायम राख्न मद्दत गर्छ भने स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी तर पराजित उम्मेदवारहरूले पनि स्थानीय तहको बजेट पारदर्शितामा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । बजेट पारदर्शिताका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण भूमिका चाहिँ स्थानीय नागरिककै हुन्छ ।
जनप्रतिनिधिलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बन्न स्थानीयले नै दबाब दिनुपर्छ । अनावश्यक सेवा÷सुविधा, जनशक्ति भर्ना र आफूअनुकूलका काममा स्रोत केन्द्रित गर्न दिनु हुँदैन । सम्बन्धित स्थानीय तहको सन्तुलित विकास र जीवनस्तर सुधारका लागि आउँदो बजेटबाट धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । एक हिसाबले आउँदो बजेट स्थानीय तहको स्वायत्तता र विकासका लागि कोसेढुंगा नै हो ।
नयाँ संरचनाका लागि गएको बजेट सुरुकै वर्षमा दुरुपयोग भयो भने त्यसले संघीयताकै स्थायित्वमाथि प्रश्न खडा गर्छ । अबका दिनमा स्थानीय तहले नजिकका अरू स्थानीय तहभन्दा राम्रो काम गर्नैपर्छ, यसले स्थानीय सरकारको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास हुन्छ भने नागरिकमा परिवर्तनको सकारात्मक प्रभाव सञ्चार हुन्छ । नागरिकको विश्वास जित्न नसक्ने स्थानीय सरकारको भविष्य त्यति सुखद हुँदैन ।
स्थानीय सरकारबाट हुने काम–कारबाही नागरिकमैत्री भएनन् भने पाँचवर्षे कार्यकाल विवादास्पद बन्न पुग्छ । यसले सम्बन्धित स्थानीय तहमा निर्वाचित राजनीतिक दल र प्रतिनिधिहरूको छविमाथि समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्छ ।
स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता बढाउनुपर्छ
डा. सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधार नीतिविज्ञ
स्वायत्तताको प्रयोग हुने गरी अधिकार लिनुअघि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र नागरिकले संविधान बुझ्नुपर्छ । यसअघिका संविधानमा भन्दा नेपालको संविधानमा नितान्त फरक अधिकार र दायित्व सिर्जना गरिएको छ । स्थानीय स्तरको सेवा स्थानीय सरकारले नै प्रवाह गर्ने भनेपछि सोहीअनुसार काम गर्नुपर्छ, यसको मुख्य आधार क्षमता विकास नै हो ।
स्थानीय तहको कार्यसञ्चालनका लागि पहिलो चरणमा आर्थिक स्रोत, भौतिक संरचना र प्रशासनिक आधार आवश्यक पर्छ । यी आधार बनाउन सुरुका वर्षमा संघले वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सघाए पनि सधैं केन्द्रकै अनुदानबाट स्थानीय तह चलाउन सम्भव छैन, स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक स्रोत आफैं जुटाउनुपर्छ ।
केही करोड रुपैयाँ संघीयता अनुदान हात पार्ने र पहिलेझैं वडा–वडामा बाँडेर मनमौजी खर्च गर्ने पहिलेकै मानसिकता यथावत् रहे संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय तह चल्दै–चल्दैन । त्यसैले, जननिर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो ठाउँको स्रोतको यकिन पहिचान गर्नुपर्छ ।
विकासको पहिलो चरणमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण नै आधारभूत सर्त हो । त्यसपछि मात्रै आर्थिक, सामाजिकलगायतका विकास हासिल हुने हो, त्यसैले सुरुका वर्षमा स्थानीय स्तरको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि राम्रा योजना तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनमा सोहीअनुरूप तदारुकता देखाउनुपर्छ । पहिलेझैं योजना छनोटमै मनपरी गर्ने र भुक्तानीमा मिलेमतो गर्ने प्रवृत्ति हावी भयो भने स्थानीय तह कहिल्यै विकासको चरणमा प्रवेश गर्दैनन् ।
अबका दिनमा केन्द्रीय सरकारी निकायको काम सिधै स्थानीय तहमा जाँदै छ । यसको अर्थ साविकका सरकारी निकायमा जाने बजेट अबका स्थानीय तहकै कोषमा जाँदै छ । यसरी सीधै स्थानीय तहलाई बजेट कार्यान्वयन गराउनुअघि तत्काल पूर्ण रूपमा कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
योजना तर्जुमा र स्रोत व्यवस्थापनलाई सहज तुल्याउन संघले पहिलो चरणमा प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक संरचना र ज्ञान हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । योजना तर्जुमा, विकास र अधिकार प्रयोगबारे स्थानीय सरकारलाई सचेत बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा गएको बजेटको पारदर्शिता र सदुपयोगका लागि संघले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
सचेत नागरिक भएका स्थानीय तहमा त राम्रै काम होला, तर नागरिकले निगरानी राख्न नसक्ने तहहरूमा भ्रष्टाचार हुन नदिन विशेष निगरानीको आवश्यकता छ । बजेट जाने तर नागरिकलाई थाहै नहुने यसअघिको अवस्था हटाउनुपर्छ । यसअघि गाविसका अध्यक्ष र सचिवले मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्ने र सचिव जेल जानेसम्मको अवस्था आयो ।
पहिले–पहिले सचिवले मात्रै निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने हुनाले गाविसका अध्यक्षहरू कारबाहीबाट बचे । तर, अहिले जनप्रतिनिधिकै हातमा कार्यकारी दायित्व पुगेको छ, जसमाथि दुरुपयोग भए जनप्रतिनिधि नै कारबाहीको भागीदार हुन्छ, त्यसैले स्थानीय तहमा गएको बजेट गुपचुप राख्नु हुँदैन । व्यवस्थित विकासका लागि ध्यान दिनुपर्छ । यी सबै कामका लागि स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ ।
संघमै निर्भर हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन
प्रा. डा. हेमराज सुवेदी
प्रमुख द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययन विभाग (त्रिभुवन विश्वविद्यालय)
स्थानीय तहको स्रोत विश्लेषण गरेर मात्रै संघीय सरकारले बजेट पठाउनुपर्छ, किनभने संघीयता बलियो बनाउन स्थानीय निकाय शक्तिशाली हुनुपर्छ र यसका लागि स्थानीय तह आफैंले स्रोत जुटाउन सक्नुपर्छ ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा झैं पहिले २ करोड बजेट दिइएकोमा यो वर्ष ४ करोड रुपैयाँ पु¥याउने घोषणा स्रोत सन्तुलनका हिसाबले प्रत्युत्पादक बन्न पुग्छ । किनभने विनियोजित बजेट खर्च गर्न स्थानीय तहको क्षमता, विज्ञता र निर्वाचित जनप्रतिनिधि कति सक्षम छन् भन्ने हेर्नुपर्छ ।
यसअघि विकेन्द्रीकरणको मर्मअनुसार स्थानीय निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको थियो, जुन फिर्ता लिन पनि सकिन्थ्यो । अहिले संघीयताको मर्मअनुसार संविधानले नै स्थानीय तहलाई अधिकार निक्षेपण गरिदिएको छ, जुन फिर्ता लिन सकिँदैन, अर्थात् बजेट पठाएपछि त्यसलाई खर्च गर्ने विषयमा स्थानीय तहले स्वायत्तताको गलत अर्थ लगाउँदै आफूखुसी गर्न सक्छन् ।
त्यसैले, बजेट पठाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रको आन्तरिक स्रोत पहिचान गर्ने, संघले स्रोत अभाव भएका स्थानमा प्राथमिकीकरण गरी बजेट पठाउने र स्थानीय तहकै स्रोतबाट हुन सक्ने कामको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्छ ।
नयाँ प्रशासकीय एकाइहरूको गठनसँगै सरकारको व्ययभार भारी मात्रामा बढ्दै छ । अर्कातिर संघीयता आएको महसुस हुने गरी जनमुखी विकासको लहर ल्याउनुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ, यो निकै महŒवपूर्ण समय हुँदाहुँदै स्रोतका हिसाबले चुनौतीपूर्ण पनि छ । त्यसैले, स्थानीय तहले आफैं स्रोत जुटाएर गर्न सक्ने कामका लागि पनि संघमै निर्भर हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।
ठूलो आकारको लगानी आवश्यक पर्ने परियोजनाहरू केन्द्रले अघि बढाउनुपर्नेछ, यस्तो समयमा बजेटको कनिकाछराइ रोक्नैपर्छ । यसअघिझैं व्यवस्था बदलिने तर व्यवहार नबदलिने समस्या यथावत् रह्यो भने संघीयता फलिफापसिद्ध हुँदैन, अफापसिद्ध हुन्छ । संघीय बजेटले विकासको नारा बाँड्ने मात्र गर्नु हुँदैन, अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।
बजेट पठाइसकेपछि विनियोजनको आकारअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रतिव्यक्ति आय, गरिबीको अवस्था, शैक्षिक सुधार, रोजगारी र सेवा–सुविधाको गुणस्तर सुध्रिनुपर्छ, तत्काल यी प्रतिफल हासिल गर्न स्थानीय सरकार सक्षम नहुन सक्छ । जुनसुकै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि निर्वाचित भए पनि विकास, समृद्धि र जनताको जीवनस्तर उकासिनैपर्छ ।
निर्वाचितले आफूलाई जनमुखी बनाउँदै सिंहदरबार गाउँतहमा पुगेको अनुभूति दिलाउनुपर्छ । स्थानीय तहको पछौटेपन, समाज, राष्ट्र र नीतिका कारण निश्चित समुदायमा व्याप्त सबै खालका पछौटेपन हटाउनुपर्छ ।
सबै स्थानीय तहमा स्रोत–साधनको उपयोग गर्न, दुरुपयोग रोक्न र स्रोत सिर्जना गर्न सम्भाव्यता छ÷छैन, त्यसलाई विश्लेषण नगरी बजेट पठाइरहँदा स्थानीय तह यसअघिकै झैं संघमुखी बन्न पुग्छन् । स्थानीय सरकारले संघबाट बजेट आइहाल्छ भन्दै आफ्ना सेवासुविधा विस्तार गर्ने खतरा उत्तिकै छ । यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी स्रोतको सदुपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ ।